DF oo looga digay iney ka hortimaado natiijada shirka Habargidir ee Hobyo -News and information about Somalia
Home News DF oo looga digay iney ka hortimaado natiijada shirka Habargidir ee Hobyo
DF oo looga digay iney ka hortimaado natiijada shirka Habargidir ee Hobyo
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa looga digay in ay ka hortimaddo shirkii dhawaan kusoo idlaadey Magaalo xeebeedka Hobyo ee Gobolka Mudug.
Nabadoon Cali Diiriye Aloore oo kamid ah waxgaradka Gobolka Mudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkii kusoo dhamaaday hobyo uusan aheyn mid lagu duminayay dowladnimadda Soomaaliya balse uu ahaa mid odayaasha Gobolka ku tashanayeen.
Waxa uu sheegay in Soomaalida haatan dhexdooda ay dagaalshan yihiin,sidaasna uu shirka ku dhacay.
Ugu dambeyntii nabadoon Aloore ayaa Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay la yimaadaan siyaasadda dagan iyo dhaqan, oo dalka iyo dadkaba lagu maamuli karo.
Previous articleGuddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo 5-Qodob oo Xasaasi ah soo saaray+(Aqri)
Next articleAlshabaab oo soo bandhigtay Muuqaal ku saabsan Qarxinta Hoteelada Muqdisho & Xalaaleynta…
Xildhibaanada Cusub Ee Galmudug Oo Maanta Kulan Yeelanaya
Kenya & Itoobiya isku haya gacanta ku heynta magaalada Kismaayo &...